Laba Qarax oo is xiga oo la maqlay Markii Ciidamada Dowladda iyo kuwa AMISOM gudaha u galeen Magaalada Jowhar iyo khasaare ka dhashay qaraxyadaasi
Laba Qarax oo is xiga oo la maqlay Markii Ciidamada Dowladda iyo kuwa AMISOM gudaha u galeen Magaalada Jowhar iyo khasaare ka dhashay qaraxyadaasi.
Ciidamada Dowlada Soomaaliya iyo kuwa AMISOM markii ay gudaha ugaleen magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeelada Dhexe waxyar kadib ayaa waxaa la soo sheegayaa inay dhaceen laba qarax oo dhawaqooda laga maqlay magaalada oo dhan.
Wararka ayaa sheegaya in qaraxyada ay ka kala dhaceen xaafadaha Horeseed iyo Hanti-wadaag, lamana oga baa laeeyahay qadaaraha ay geysteen.
Qaraxa koowaad ayaa la sheegay inuu ka dhacay xaafada Horseed, waxaana la aaminsanyaha qaraxaasi inuu ahaa miinada dhulka lagu saao oo laga hago meelaha fog, halka kan labaad uu ka dhacay xaafada Hanti-wadaag.
Wararka qaar ayaa sheegaya in qaraxyada ay ahaayeen miinooyin dhulka ay ku aaseen kooxda Al-shabaab markii ay ka baxayeen magaalada, ayna arkeen ciidamada dabeedna ay qarxiyeen.
Dhinaca kale dadweynaha ku nool magaalada ayaa soo dhaweeyay ciidamada dowlada iyo kuwa AMISOM markii magaalada ay gudaha u soo galeen, waxaana maanta ay utahay reer Jowhar maalin farxadeed, inkastoo dadka weli ay muujinayaan cabsi oo aysan ku dagdageyn ciidamada.